Samsung Galaxy Fold nwere ụbọchị mmalite maka South Korea | Gam akporosis
Samsung Galaxy Fold nwere ụbọchị ntọhapụ maka South Korea
Ebe ọ bụ na Samsung ẹkenam ya mbụ foldable ama, nke bụ Fold Galaxy, ọtụtụ ndị enwewo mmasị na nhazi na ihe niile ọdụ a ga-enye, ebe ndị ọzọ ahọrọbeghị nke a, mana maka Mate X nke Huawei, ndoro-ndoro nke otu.
na nsogbu ihuenyo Ndi Galaxy Fold dara - na obughi mpako - amaghi na mbu. Ndị a malitere ịpụta n'ụzọ pụtara ìhè mgbe ụlọ ọrụ ahụ nyere ya ụfọdụ ndị ọrụ, ụlọ ahịa na ụlọ ọrụ iji gosi uru ya, mana ihe adịghị mma. Mgbe nsogbu ndị ogwe nke nkeji nke ekwentị a dị oke ọnụ malitere, onye nrụpụta South Korea ga-egbu oge tọhapụ ụbọchị n'oge dị iche iche, rue ugbu a, ebe ọ bụ na enweelarị onye ọrụ gọọmentị, nke ahụ bụ ihe anyị ga-atụle ọzọ.
Na nso nso a, ụlọ ọrụ ahụ gosipụtara nke ahụ Samsung Galaxy Fold ga-ere ahịa site na Septemba afọ a. Agbanyeghị, nnukwu onye South Korea ahụ ekwupụtaghị ụbọchị ọ ga-eweta ahịa ahụ.
Samsung Galaxy Fold screen nsogbu
Ugbu a, akụkọ ọhụrụ na-akọ banyere nke ahụ Foldable Smartphone iji malite na South Korea na Septemba 6, ụbọchị na-ewe naanị otu izu. Dị ka akụkọ ahụ si kwuo, ụlọ ọrụ ahụ zubere ịmalite Galaxy Fold na mbubreyo September, ma n'ihi ihe ụfọdụ kpebiri ịmalite ya na mbido September. Datebọchị a, n'ụzọ dị ịtụnanya, dabara ụbọchị mbido mmemme IFA nke afọ a, nke ga-eme na Berlin, Germany, wee kwụsị na 11 nke otu ọnwa. (Chọpụta: N'ihi nke a, agbajiri ihuenyo nke Galaxy Fold, dị ka iFixit)
The redesign nke Galaxy Fold dị njikere: Ndị a bụ mgbanwe ya
Ọ bụghị gọọmentị na-enye ozi a. Ya mere, anyị na-atụ aro ka ị ghara ịdabere na akụkọ ahụ anyị kwuru ugbu a. Samsung nwere ike kpebie ịmalite Galaxy Fold n'ime izu ole na ole ka e mesịrị, mana ọ ga-abata n'oge ọ bụla na Septemba.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Samsung Galaxy Fold nwere ụbọchị ntọhapụ maka South Korea
Emepụtara iPhones ọhụrụ na Septemba 10
Honor 20S enweela ụbọchị ngosi ma anyị nwere nkọwa mbụ ya